Ku saabsan EPONT Epont Floor Jack Workshop Line Production | EPONT
Khadka wax soo saarka sagxada Haydarooliga.
3.Shirkaddu waxay dabooshaa aag 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadataa "sumcadda ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, oo ah sameynta sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican.
EPONT buuxiyey shuruudaha badbaadada korantada ee qasabka ah. Waa inay ku gudubtaa imtixaannada soo socda: Tijaabada danab sare, tijaabada hadda jirta ee daadinta, tijaabada caabbinta dahaarka, iyo tijaabada sii wadida dhulka.